အခမဲ့ Deen PRO Download | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အစ္စလာမ့် Apps ကပ » Deen PRO -, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် Azan Direction အဖွဲ့ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာကိုရှာပါ
Deen PRO - Direction အဖွဲ့ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ, Azan Find ကုရ်အာန် APK ကို
Deen Pro ကို (قبلة) Qibla ၏အတိအကျကိုဦးတည်ချက်ရှာတွေ့အတွက်ကမ္ဘာအနှံ့ကမွတ်ဆလင်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများအကူညီပေးသည်တဲ့စမတ်ဖုန်း application ဖြစ်ပါတယ်နှင့်လည်းသူတို့ကိုအလွယ်တကူပဌနာပူဇော်လုပ်အရှိဆုံးတိကျမှန်ကန်ဆုတောင်းပဌနာကြိမ်ပေးသည်။ Deen Pro ကိုလည်း Scripts, အသံထှကျ, ဘာသာပြန်ချက်များကိုနဲ့ audio ရွတ်ဆို Arabic အဘိဓါန်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် Qibla တည်နေရာ, အစ္စလာမ့် Hijri ပြက္ခဒိန်, အနီးအနားမှာဗလီ၏မြေပုံနှင့်အတူအပြည့်အဝကုရ်အာန် features များနှင့် Tasbih ကောင်တာစသည်တို့ ...
အဘယ်ကြောင့် ... မွတ်စ်လင်ချိတ်ဆက်ခြင်း?
အစ္စလာမ်ဘာသာတွင်မူဆလင်များအတွက်ပြည့်စုံဘဝစတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app တွင်မူဆလင်အသုံးပြုသူများသည်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့်အတူထိတွေ့ရရန်လွယ်ကူခြင်း, ဆုတောင်း, Qibla ပေးနှင့်ရှာရန်ကုရ်အာန် feature ကိုအသုံးပြုသူတွေနဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အသက်တာ၏ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖြေရှင်းချက် exect ရှာတှေ့နိုငျ ..
ဒီ app များ၏ပင်မအင်္ဂါရပ်အချို့အစွမ်းထက် freatures ဆံ့သည့်အယ်လ်ကုရ်အာန်القرآنالكريمဖြစ်ပါတယ်။
•အသံရွတ်ဆိုထားသော: တဦးတည်း MP3 အသံ format နဲ့အားလုံးအခနျးကွီး၏ပြီးပြည့်စုံသောဇာတ်ကြောင်း (Qiraat အယ်လ်ကုရ်အာန်) ကိုနားထောင်ခွင့်ပြုသည်။
•သို့ဘာသာပြန်ချက်များ: ကုရ်အာန်ဘာသာပြန်စာပေ multipul ဘာသာစကားများနဲ့တူ: (အင်္ဂလိပ်, ဒူ, အငျဒိုနီးရှား, မလေးရှား, စပိန်, ပြင်သစ်, ဘင်္ဂလာ, တရုတ်, ပါရှနျ, အီတလီ, ဒတျချြနှင့်ဟိန်ဒီ)
•ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ်၎င်း၏အလားတူစာဖတ်ခြင်း option နဲ့အတူ Arabic အဘိဓါန်စာသားအသံထွက်လွယ်ကူသောကို
•ရှာရန်ဘား: သန့်ရှင်းသောဘုရားစာအုပ်၏တပ်မက်လိုချင်သောအစူရဟ်ရွေးချယ်ရာတွင်မှမူဆလင်ဟာ android user ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်
• Ayah ရန် Go: app ကိုစားသုံးသူ ayat အရေအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်ပစ္စုပ္ပန်စူရဟ်မဆို Ayah မှခုန်အားခွင့်ပြုပါ။
• Bookmarks: အကြိုက်ဆုံးရန်အသုံးပြုသူကိုခွင့်ပြုပါသို့မဟုတ် left ရှိရာနေရာတစ်ခုတည်းကနေဆက်လက်နိုင်ရန်အတွက်စူရဟ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့် ayat သိမ်းဆည်းပါ။
• Stop လက္ခဏာတွေ: ထပ်တလဲလဲအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အမွငျ့မွတျ Volume ထဲမှာလာဖြင့်ခေတ္တမျိုးစုံများထဲမှမိမိတို့၏အနက်နှင့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သိကျွမ်းပေးနိုင်ပါတယ်ရာထည့်သွင်းထားပါသည်။
• Sajdahs: တယောက်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ရှေ့မှောက်၌မှောက်ရက်ဖျော်ဖြေဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်မှာကျမ်းမြတ်ကိုရ်အာန်ထဲမှာ 14 သောနေရာများလည်းသီးခြားစီချိန်ညှိမှုများတွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည်။
•လွယ်ကူ Navigation: အညွှန်းကိန်းကနေတိုက်ရိုက်မဆို Juz သို့မဟုတ်စူရဟ်ကိုဖွင့်။ ဒါဟာအားလုံး 30 အခန်းကြီးနှင့် 114 Surah ရှိပါတယ်,
•အနေ့ Ayat: ကုရ်အာန်ကိုဖတ်ရှုနေစဉ်အသုံးပြုသူသူငယ်ချင်းများနှင့်အကြိုက်ဆုံး Ayat မျှဝေနိုင်ပါသည်
2) Qibla, Azan, & ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာ
ဒီ app ကိုအကောင်းဆုံး Feature ကို Qibla Direction အဖွဲ့ & ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာဖြစ်ပါတယ်။
•တိကျမှန်ကန်သော Qibla (قبلة) LOCATION: လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကိုဖြတ်ပြီး Qibla ၏အတိအကျတည်နေရာရှာဖွေတာအတွက်ကူညီပေးခြင်း။
• Salat အချိန်: (ထောင့်) ရရှိနိုင်မျိုးစုံ setting များကိုဖြင့်သင်၏လက်ရှိတည်နေရာအပေါ်အခြေခံပြီးတိကျမှန်ကန်သောဆုတောင်းပဌနာကြိမ်ကို Select လုပ်ပါဥပဒေပညာရှင်ကျောင်းအဆိုအရ Shafi / မာလီကီ, Hanbali သို့မဟုတ် Hanafi ၏ Thoughts ၏
• Azan: အများအပြား muezzin အသံနှင့်အတူဆုတောင်းပဌနာများအတွက်ခေါ်ဆိုမှုများအတွက်အမြင်အာရုံနဲ့ audio အကြောင်းကြားစာများအနေဖြင့်ရွေးချယ်ဖို့
• Kabba LOCATION: အွန်လိုင်း (GPS စနစ်သုံးပြီး) နှင့်အော့ဖ်လိုင်း (ကိုယ်တိုင်လက်ရှိတည်နေရာထည့်) သည် Modes နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ Track Kaaba တည်နေရာ
- Tasbih သင့်ရဲ့ dhikr ရေတွက်ရန်
Dhikr (Zikar) အတွက်အများကြီးလူသိများအစ္စလာမ့် tasbhi မွတ်စလင်ရွတ်ဆိုသင့်တယ်အကြိမ်အရေအတွက်ကများနှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။
- အစ္စလာမ့် Hijri ပြက္ခဒိန်
ထိုကဲ့သို့သောအစ္စလာမ်မစ်နှစ်သစ်အဖြစ်ကိုသန့်ရှင်းသောရက်စွဲများကိုခန့်မှန်းရန်မွတ်စ်လင် Hijri ပြက္ခဒိန်ကိုအပြီးသတ်မနက်စောစော-ul-Fitr နှင့်မနက်စောစော-ul-Adha
- အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ 99 အမည်များ
ဘာသာပြန်ခြင်းနှင့် benifits နှင့်အတူ Asma-ul-Husna ။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏3အမည်များ MP99 ရွတ်ဆိုထားသော။
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်အနန္တတန်ခိုးရှင်၏စစ်မှန်သောစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စ်လင်ကုရ်အာန် kareem ၏အလင်း၌နေ့စဉ်ပြဿနာများကို၏အရှိဆုံးခိုင်လုံသောဖြေရှင်းချက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
- အနီးဆုံး Masjid (ဗလီ) ကိုရှာပါ
သငျသညျစိတ်ကူးယဉ်ရှာရန်ဗလီဂျီပီအက်စ်အညွှန်းကို အသုံးပြု. နှင့် Masjid ရန်သင့် palce ကနေမြေပုံပေါ်တွင်ဦးတည်ချက်အရ။
အပြည့်အဝအင်္ဂလိပ်, Français, Italiano, Español, Türkçe, русскийသို့ဘာသာပြန်ထားသော Deen Pro ကို 360, Bahasa အင်ဒိုနီးရှား, Melayu, Deutsch လုံးကိုအဓိကအကြောင်းအရာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးအစ္စလာမ်မစ် tool ကိုလက်တွေ့ကျတဲ့အကောင်းဆုံးမွတ်စလင်လိုအပ်ပါတယ် Get ။
Facebook ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ: fb link ကို
ကျနော်တို့နွေးနွေးထွေးထွေးကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းတိုးတက်လာဖို့သငျသညျတုံ့ပြန်ချက်နှင့် sugesstion ကြိုဆိုပါတယ်။ အီးမေးလ်က: သင်တို့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်ချက် valueable ဝေမျှမယ် sufirq378@gmail.com
Deen PRO -, ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် Azan Direction အဖွဲ့ဆုတောင်းချက် Times သတင်းစာကိုရှာပါ
39.89 ကို MB